🥇 ▷ TCL PLEX: Telefishanka ugu horreeyay ee magaca ayaa magacooda lagu sheegay ✅
TCL PLEX: Telefishanka ugu horreeyay ee magaca ayaa magacooda lagu sheegay
TCL waa shirkadda ka dambeysa magacyada sida Alcatel. Toddobaadkii hore ayaa la shaaciyey in shirkaddu ay bilaabi doonto taleefanka casriga ah astaan ​​u gaar ah markii ugu horreysay ee suuqa, taas oo si rasmi ah loogu soo bandhigi doono IFA 2019. Telefankan casriga ah ayaa lagu soo bandhigay munaasabad ka dhacday Berlin. Kani waa TCL PLEX, taleefoon aan horeyba u ognahay faahfaahinta oo dhan.
TCL PLEX waa taleefanka gacanta ee dhexda u dhexeeya. Sidaa darteed, waxay gaartaa qeyb suuq ah halkaas oo tartanku ugu badan yahay, laakiin halka ay door wanaagsan ka ciyaari karto arrintan. Waxan kaaga warrameynaa wax walba oo ku saabsan moodelkan hoosta.
Astaantu waa ay iska caddahay isbeddelada suuqa. Waa nalaga tegey shaashad leh god leh taleefanka gacantan, kaas oo u oggolaanaya muujinta inuu si muuqata u isticmaalo isticmaalka taleefanka hore. Isaga gadaashiisa waxaan ka helnaa seddex kamaradood, mid kale oo heer dhexe ah iyo qalabka sawirka faraha.
TCL wuxuu soo bandhigayaa tusaalaha telefishanka alcatel isku laabma MWC19
Faahfaahinta TCL PLEX
Shirkadda waxay u bilaabatay qaabkan inay ku guuleysato dabaqadda dhexe iyadoo la adeegsanayo TCL PLEX. Tani waa moodel ku habboon heerka farsamada., iyadoo la raacayo qeexitaanno aan ku aragnay moodooyin kale isla isla qeybtan suuqa. Marka sidaas maahan wax la yaab leh, laakiin ahaanshaha moodhalka ugu horreeya ee astaanta leh magaceeda ayaa abuureysa xiisaha. Tani waa kala duwanaansho weyn oo arrintan ku saabsan. Kuwani waa faahfaahinta tilifoonka gacmeed ee dhammaystiran:
Tilmaamaha Farsamada TCL PLEX
Nidaamka hawlgalka Android 9.0 Cake
shaashadda 6.53-inji LCD leh xalka HD buuxa + 2340 x 1080 pixels
Kaydinta Gudaha 128GB (waxaa lagu balaarin karaa 256GB oo lagu qaato kaarka microSD)
Qalabka gadaal gadaal 48 MP oo leh f / 1.8 aperture + 16 MP leh f / 2.4 aperture + 2 MP leh f / 1.8 aperture iyo Flash flash
Kaameerada hore 24 MP leh daboolka f / 2.0
Isku xirnaanta Wi-Fi 802.11 b / g / n – Bluetooth 5.0 – GPS / AGPS / GLONASS – Dual SIM – USB C –
Astaamo kale NFC sawirka faraha
Bateriga 3,820 mAh oo leh lacag deg deg ah Kusoo deg deg ah 3,020 mAh
Cabirid 1622 x 76.56 x 799 mm
Miisaanka 192 garaam
TCL waxay sharraxday ujeedkeeda ah inay ku bilowdo taleefan gacmeed astaamihiisa gaarka ah. TCL PLEX waa taleefanka gacanta ee bilaabay hal-abuurkan. Astaantu waxay ina siineysaa midab aad u wanaagsan oo iskuxiran, kaas oo noo ballan qaadaya inuu na siinayo wax qabad wanaagsan marwalba. Adeegso Snapdragon 675, taas oo ah mid ka mid ah soosaarayaasha heerka sare ee suuqan. Waxay kale oo ku timaaddaa iskudarka hal RAM iyo kaydinta.
Kaameeradu waa mid ka mid ah muuqaalka sare ee TCL PLEX.. Adeegso saddex dareemayaal, sida caadiga ah bartamaha-dhex-dhexaadka, oo leh 48 senator ugu weyn kiiskan. Dhanka hore, hal 24 MP ah ayaa loo isticmaalaa, kaas oo lagu ridayaa god meel shaashadda telefoonka gacanta ah. Batteriga wuxuu leeyahay awood wanaagsan, 3,820 mAh, marka lagu daro inuu haysto taageerada kicinta degdegga ah. Waxay la timid Android Pie sida nidaamka hawlgalka, in kasta oo ay shirkaddu xaqiijisay inay cusbooneysiin doonto Android 10 sannadka soo socda.
Marka laga hadlayo bilaabida TCL PLEX suuqa, ilaa iyo hadda nama aysan siin macluumaad badan oo ka imanaya suuqyada Shiinaha. Waa la xaqiijiyay taas waxay bilaabi doontaa dhamaadka sanadka Yurub. In kasta oo aan ka wada hadalnay suuqyo gaar ah, wali ma ogin dalalka ay lahaan karaan, ama haddii Spain mid ka mid noqon doono. Marka waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan helno xog intaa ka badan oo arrintan la xiriirta.
Taleefankan waxaa lagu bilaabi doonaa bakhaarada leh qiimo dhan 329 euro.. Waxay sidoo kale ku sameyn doontaa laba midab, madow iyo caddaan, kuwaas oo lagu naaneeso “obsidian madow” iyo “opal white”. Waxaan fiiro gaar ah siin doonaa wararka cusub ee ku saabsan bilaabista taleefonka ugu horreeya ee TCL oo ah astaan ​​u gaar ah oo ku taal suuqa. Sababtoo ah waa macquul in lagu bilaabo gudaha Spain, ugu yaraan soo-qaaditaankan suurta-gal ah lama soo saarin. Maxaad u maleyneysaa taleefankan gacanta?